जीवन बचाउन सक्छ जमराले (अडियोसहित)
आज दशैको टीका जमरा लगाएर मान्यजनबाट आशिस थाप्ने दिन । सामान्यता हामी जमरा लगाएपछि फाल्छौं अथवा कतै राख्छौं ।
समग्रमा त्यसको सदुपयोग गर्दैनौ तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, जमरा क्यान्सरलगायतका रोगको औषधी पनि हो ।
अक्सर दशैंमा विभिन्न अन्नको जमरा उमारेर टिका लगाएपछि शिरमा सिउरिने गरिन्छ । जमरा शिरमा सिउरिन किन योग्य छ भन्ने कुरा यसको औषधीय गुणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
के के पाइन्छ जमरामा ?
गहुँको जमराको जुस सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ । खासगरी मुख तथा दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउन, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित गर्न, पाचन यन्त्र बलियो बनाउन, कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न गहुँको जमरा उपयोगी हुन्छ ।
त्यसका साथै कतिपय छालाको समस्या र केसको समस्यामा पनि गहुँको जमरा लाभदायक हुन्छ । गहुँको जमरा त्यसै चपाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट रस निकालेर पिउन पनि सकिन्छ । गहुँको जमराको जुस बनाएर पिउँदा स्वादिलो हुन्छ ।
कसरी बनाउने त जुस ?
- आठदेखि दश वटा गहुँको जमरा जरामै काटेर राम्ररी धुने, यसलाई कुटेर रस निकाल्ने ।
- सफा कपडामा त्यसलाई राख्ने र निचोर्नुपर्छ । यसको रस कुनै गिलासमा राख्नुपर्छ ।
- यो जुसमा थोरै तुलसीको रस चुहाइदिन सकिन्छ । साथै मह र अदुवा पनि मिश्रण गर्न सकिन्छ ।
- यो जुसमा थोरै पानी मिसाउनुहोस् । अब जुस पिउन सकिनेछ ।